စောမင်းဝိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၂၃၁ – ၁၂၃၅
၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၇၃ ပြီးနောက်
စောမင်းဝိုင်း (ဖွားစော ဟုလည်း သိကြ) သည် ပုဂံခေတ် နရသိင်္ဃ ဥဇနာမင်းသား၏ မိဖုရားနှစ်ပါးအနက် တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ နရသိင်္ဃကို မည်သည့်ရာဇဝင်ကျမ်းကမှ ပုဂံဘုရင်အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း မပြုသော်လည်း အိပ်ဂျီလုစ် နှင့် ဒေါက်တာသန်းထွန်းကဲ့သို့သော သမိုင်းပညာရှင်အချို့က နရသိင်္ဃကို ဘုရင်တစ်ပါးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ဒေါက်တာထင်အောင်နှင့် မိုက်ကယ်အောင်သွင်ကဲ့သို့သော အချို့သော သမိုင်းပညာရှင်များကမူ နရသိင်္ဃအား ဘုရင်အဖြစ် အသိအမှတ် မပြုကြပေ။
ကျောက်စာအထောက်အထားများအရ သူမသည် နရသိင်္ဃနှင့် အေဒီ ၁၂၁၂ တွင် လက်ထပ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ပြီး အသက် ၁၈ မှ ၂၀ နှစ်အတွင်း ရှိနိုင်သည်။ သူမသည် နရသိင်္ဃ၏ ပထမဆုံးဇနီး (သို့မဟုတ် မိဖုရားခေါင်) မဟုတ်သော်လည်း မိဖုရားခေါင်၏ သားတော်နှစ်ပါးထက် သူမ၏ သားတော် ဥဇနာက ထီးနန်းဆက်ခံသည်ကို ထောက်ရှု၍ သူမသည် ဩဇာအာဏာကြီးမားသူ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ မိဖုရားစောမင်းဝိုင်း၏ နောင်တော်နှစ်ပါးမှာ အထက်တန်း အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိများ ဖြစ်ကြသည်။ ဒုတိယနောင်တော်မှာ မနောရာဇာ (မဟာသမန်ကြီး ဟုလည်း သိကြ) ဖြစ်ပြီး ကျစွာနှင့် ဥဇနာမင်းများလက်ထက်တွင် အမတ်ကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
သူမလှူဒါန်းခဲ့သော မင်းဝိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ ကျောက်စာအရ သူမသည် အေဒီ ၁၂၇၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်နေ့အထိ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အခြားကျောက်စာတစ်ခုအရ သူမသည် ၁၂၇၇ အောက်တိုဘာတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သူမသည် ပုဂံခေတ် မိဖုရား ဖွားစော သုံးဦးတွင် ပထမဆုံး ဖွားစော ဖြစ်သည်။ အခြားနှစ်ဦးမှာ ဥဇနာမင်းနှင့် နရသီဟပတေ့တို့၏ မိဖုရားခေါင် စောလှဝန်းနှင့် ကျော်စွာဘုရင်၏ မိဖုရား စောသစ်မထီးတို့ ဖြစ်ကြသည်။
↑ သန်းထွန်း ၁၉၆၄၊ စာ ၁၃၄
↑ ၂.၀ ၂.၁ ထင်အောင် ၁၉၇၀၊ စာ ၄၃
↑ ၃.၀ ၃.၁ သန်းထွန်း ၁၉၆၄၊ စာ ၁၃၂
↑ အောင်-သွင် နှင့် အောင်-သွင် ၂၀၁၂၊ စာ ၉၉
↑ ၅.၀ ၅.၁ ဘရှင် ၁၉၈၂၊ စာ ၃၆
↑ ဘရှင် ၁၉၈၂၊ စာ ၃၃
↑ သန်းထွန်း ၁၉၆၄၊ စာ ၁၄၂
Aung-Thwin၊ Michael A.; Maitrii Aung-Thwin (2012)။ A History of Myanmar Since Ancient Times (illustrated ed.)။ Honolulu: University of Hawai'i Press။ ISBN 978-1-86189-901-9။
ဘရှင်, ဗိုလ်မှူး (၁၉၆၆). "ပုဂံခေတ် ဖွားစောများ" (in မြန်မာဘာသာ). ရန်ကုန်: မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းသုတေသန ဦးစီးဌာန.
ထင်အောင်၊ မောင် (1967)။ A History of Burma။ New York and London: Cambridge University Press။
မွေးဖွား c. ၁၁၉၃ ကွယ်လွန် ၁၂၇၀ ဆယ်စုနှစ်
မြောက်ပြင်သည် (ထီးလိုမင်းလို) မြောက်နန်းမတော် မိဖုရား
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စောမင်းဝိုင်း&oldid=654760" မှ ရယူရန်
၁၁၉၀ ဆယ်စုနှစ် မွေးဖွားသူများ
၁၂၇၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။